Kalfadhiga 44raad ee golaha wakiillada Puntland oo furmay iyo gudoonka oo aan ka hadlin hawlaha horyaal – Kalfadhi
Kalfadhiga 44raad ee golaha wakiillada dowladda Puntland ayaa maanta si rasmi ah u furmay kadib munaasabad balaaran oo ay ka soo qayb-galeen golayaasha dowladda, bulshada rayidka iyo hay’adaha beesha caalamka ee Garowe jooga
Gudoomiyaha golaha wakiillada Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed oo furitaanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in xildhibaanadu ay labadii bilood ee ugu dambeeyay ku maqnaayeen kormeero iyo safaro shaqo oo ay ku tegayeen deegaan doorasheedkooda iyagoo u kuur-gelayay xaaladda dadka ay metelaan.
Gudoomiyuhu wuxuu khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha ammaanka iyo difaaca gobolada Sanaag iyo Sool, halkaas oo ay ka jirto xiisad u dhexaysa Puntland iyo Somaliland. Dhoobo-daareed oo sidoo kale ka hadlay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta wuxuu xukuumadda ugu baaqay in ay abuurto barnaamijyo horumarineed oo ku aadan beeraha, Kalluumaysiga iyo iibka xoolaha.
“Si looga boxo dhibaatooyinka shaqo la’aanta, tahriibka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha, dowladda waxaa xil ka saaran yahay in ay la timaado qorshe lagu abuurayo fursado shaqo si ay da’yartu dalkooda u aaminaan” ayuu yiri Dhoobo
Khudbad dheer oo uu jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilladu kuma uusan faahfaahin hawlaha shaqo ee mudada kalfadhigan baarlamanka horyaal, maadama uu yahay kalfadhigii labbaad ee ay yeelanayaan baarlamanka cusub.
Xaruunta golaha wakiillada Puntalnd iyo munaasabadda furitaanka Kalfadhiga maanta
Laakiin gudoomiyaha ururka dowladaha hoose ee Puntland ahna duqa degmada Garowe Axmed Siciid Muuse ayaa baarlamanka ka codsaday mudada Kalfadhigan in ay wax ka qabtaan dib u eegista xeerka dowladaha hoose, xeerka caasimadda iyo siyaasadda dhulka oo uu sheegay in ay muhiim u tahay hawl socod-siinta dowladaha hoose ee Puntland.
Sidoo kale, gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayid ka ah ee Puntland Faysal Axmed Warsame ayaa baarlamanka u jeediyay in shuruucdii hore goluhu u ansixiyay ee khaanadaha isaga jira ay muhiim tahay in laga shaqaysiiyo. Wuxuu sheegay in arrintaas Baarlamanka cusub lagu qiimayn doono sida ay wax uga qabtaan.
Docda kale, wuxuu u jeediyay golaha wakiillada in shuruucda kale ee muhiimka ah ee loo baahan yahay ay dedejiyaan, wuxuu intaas ku daray in shuruucdaas oo la sameeyo aysan u xanibnaan karin taageero bannaanka ah oo la waayo.
Hay’ado caalami ah ayaa shuruuc badan oo hore ay u samaysatay Puntland ka taageeray dowladda.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa furay Kalfadhiga, wuxuuna ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay waxyaabihii ay xukuumadiisu qabatay mudadii afarta bilood ee ay jirtay iyo qorshaha sannadka ee xukuumadda.
Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni oo Kalfadhiga furay
Falan-qayn: Kulankii golaha shacabka ee maanta oo u baaqday kooram la’aan xili baarlamanku fasax jiray 23 cisho